Ezinye iindlela zokwenza inyama ye-barbecue yemifuno | IBezzia
Ezinye iindlela zokwenza i-barbecue yemifuno
UPau Heidemeyer | 03/05/2021 16:00 | Ukutya, ZeMpilo
Imozulu entle iqala sijonge nayiphi na impelaveki ukuba sibe ne-barbecue kwaye sonwabe ngokutya okumnandi. Endaweni yokuba ngubani olandelayo ukutya okungqongqo kwemifuno, kusenokubonakala ngathi abayi konwaba ngakumbi njengabo batya inyama.
Oku akuyonyani ngokupheleleyo, kuba i-barbecue inokukhawulelana neemfuno zabantu abatya inyama, kwaye ibe mnandi. Ukuba ufuna ukwazi ezinye iindlela ezizezinye, Siza kukuxelela ngoko.
Ukuba imifuno kukuphila ngendlela eyahlukileyo, benjenjalo nabo Banokonwabela i-barbecue ngendlela ehlengahlengisiweyo ekukhetheni ukutya kwabo.
Izinketho ezinokuhanjiswa phakathi kwazo zii-skewers zakudala zemifuno, ii-vegan burger ezinamakhowa, ii-burger zembotyi okanye imifuno egcadiweyo eneesosi zemifuno. I-barbecue yemifuno iya kuhlala isempilweni okoko nje unengqondo kwinto ohamba nayonjengoko isinongo sinokuba "sibi" kanye njengale sisetyenziswa nenyama.
Ukuba ufuna ukwazi ezinye iindlela zokwenza ifayile ye inyama yemifunoSiza kukuxelela apha ngezantsi ukuze ube nokukhetha ngakumbi engqondweni, ukuba mhlawumbi awuzange uwele kubo.
1 Eyona ndlela ilungileyo yokutya inyama yemifuno
1.1 Imifuno yemifuno
1.2 Iifayile zikaSeitan
1.3 Imifuno ehlanganisiweyo
1.4 I-burger yemifuno
1.5 Ingqolowa eyosiweyo
1.6 Isaladi eshushu
1.7 Ukunxiba iyogathi
2 Ungayithatheli phantsi imifuno kwi-barbecue
Eyona ndlela ilungileyo yokutya inyama yemifuno
Kukho uluhlu olubanzi lwamathuba okulungiselela i-barbecue yemifuno. Ukongeza, uya kufumana ukhetho olufanelekileyo oluya kukuvumela ukonwabela i-gastronomy kunye neminye imiba.
I skewers zingenziwa kuphela kwimifuno, ezi zikwamiliselwe ngephunga kunye nencasa eshiywe kukutsha. Ukongeza, ihlala izisa imibala emininzi kwi-grill. Ukusetyenziswa kwale mifuno kuqhelekile: itswele, ipepile eluhlaza nebomvu, iitumato, ii-aubergines okanye i-zucchini.
Amakhowe anokulungela ukoyisa. Kuya kufuneka usike iziqwenga ukuze uzifake kwiinkuni ezenziwe ngeplanga okanye ngentsimbi ukuze ukwazi ukudibanisa i-skewers ngendlela othanda ngayo. Xa bepheka, unokongeza imifuno enamakha kunye neoyile ukuyenza ibengcono.
Ukuba ufuna ukongeza ubungakanani beprotein kwezi skewers unakho yongeza iityhubhu ze tofu enzima. Le mveliso, esisiphumo seembotyi zesoya, isebenze ekwandiseni idosi yeprotini kubantu abaninzi abagqiba ekubeni batya imifuno okanye i-vegan.
Njenge tofu, unokwenza i-seitan fillets, ukutya okusisiphumo sengqolowa ye-gluten efunyenwe ngokuxova umgubo kunye nokuhlamba okulandelayo ukuze kukhutshwe isitatshi. Ukongeza, ibonelela ngeeprotheyini eziphindwe kathathu kunenyama, ubuncinci be-75%.
Ukwenza iifilithi ze-seitan unokulandela le recipe incinci.
Inxalenye 1 yomgubo wepuppea.
2-3 iinxalenye zomgubo wengqolowa.
Inxalenye e-1 yesonka okanye i-cornstarch.
Hlanganisa namanzi, umhluzi wemifuno, kunye nesosi yesosi.
Ezi fillets zinongwe ngamakha kunye neziqholo, uzimise kwaye uzise kwi-grill. Ke i-seitan yakho iya kuba namanzi kakhulu, i-elastic kwaye inetoni enomdla kakhulu.
Unokukhuthazwa ukuba ulungiselele imifuno egxutywe kwi-barbecue yakho yemifuno. Ungasebenzisa i-zucchini okanye iitumato, umzekelo. Ungazigcwalisa ngesipinatshi okanye i-chard cream, kwaye ungongeza i-tofu ukonyusa ukungenisa iiprotein.
Amaqanda kunye neenkowane Banokugcwaliswa kwaye bagqibelele kwi-barbecue. Ukuba uyilao yemifuno yelacto ungasebenzisa itshizi ukuyenza ibe nencindi.
I-Burger zihlala zingukumkanikazi we-barbecues kwaye kule meko, banokuba njalo. I-burger yemifuno yenziwa ngeesiriyeli kunye nembotyi. Idityaniswe nemifuno, nokuba sisipinatshi okanye iminqathe umzekelo. Oku kubanika ubume obumnandi kunye nencasa.
Iichickpeas okanye iilentile zinokusetyenziswa njengembotyi, ukongeza, banokuzilungiselela ngokungathi yifalafel eyosiweyo. Iimbotyi zinokuhamba kunye ichives, igalikhi, iparsley, ipepile kunye netyuwa.
Ukuba awuyondawo yemidumba, unokwenza iihambhega ngokusekwe kwilayisi, ii-ertyisi okanye ngeoats. Sebenzisa zonke iisiriyeli ozithandayo, wenze uphando kwaye wonwabe ekhitshini.
Nangona ingathathelwa ngqalelo, umbona ophekiweyo kwisikhwebu ugqibelele ukugcoba kwi-barbecue. Umbona uneempawu ezintle zokutya, kwaye Enye yeendlela ezilungileyo zokuyithatha kukutya inyama.
Umbona uhlala uhamba nebheyi elungileyo yemifuno. Ungayibrasha yonke isikhwebu ngeoyile ngaphambi kokuba uyisonge kwifoyile yealuminium. Beka kwi-grill, yiguqule imizuzu eyi-15 ukuze yenziwe kakuhle kuyo yonke indawo.
Unokwenza isaladi esecaleni embindini wayo yonke ingqalelo, nge iitumato, iletisi, i-endives, ikhukhamba, nayo yonke imifuno oyifunayo.
I-lettuce yamaRoma ilungile ukwenza isaladi elungileyo, intliziyo icolile kwaye intsha. Kwakhona, ukuba uhamba nesaladi ngokunxiba kakuhle, uya kuba nayo isaladi efanelekileyo. Beka i-oyile elungileyo, iviniga yebhalsam, ityuwa, ipepile kunye nezinye iziqholo.
EKubalulekile ukuba ulinganise ixesha lokupheka lale saladi ifudumeleyoKuba azinakuba nde kwi-grill, umzekelo, ikhukhamba ingangumzuzu omnye, kodwa imizuzu emibini, xa uchitha ixesha, ubushushu buya kuyithambisa kakhulu imifuno.
Okokugqibela, ungabheja kwisosi yeyogathi eyenziwe ekhaya ekuvumela ukuba unike imifuno yakho umnxeba okhethekileyo kwaye ayisiyonto injalo. I-yogurt ivumela ukhetho oluninzi, inokuxutywa kunye negalikhi kunye nekhukhamba ukwenza i-tzaiziki yakudala, unokuhamba neyogathi kunye nesosi yesosi ukuyinika into eyahlukileyo.
Unokuxuba iyogathi, kunye neetumato ezinqunqiweyo, itswele kunye nekoriyandire, ke uya kufumana isitayile setamati esityebileyo saseIndiya. Zizinto ezifanelekileyo onokukhetha kuzo ukuze uhambe nemifuno kunye neehambhega ozilungiselele ngaphambili.
Ungayithatheli phantsi imifuno kwi-barbecue
Njengoko sele ubonile, zininzi iindlela onokuzenza kwindawo yokutya inyama, kuba sonke sicinga ngenyama kwaye akukho nto yimbi ngaphandle kwenyama. Kodwa imifuno, iihambhega, iswiti okanye iisaladi zinokuba zilungile njengeqhekeza lenyama.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » ZeMpilo » Ezinye iindlela zokwenza i-barbecue yemifuno
Izitayile eziqhelekileyo ezineejee kunye nezikipa ukutyelela isixeko
Iinwele zeenwele ezintle